Tencent သည် SPARK 2022 ဂိမ်း မိတ်ဆက် ပွဲကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ မည် – Pandaily
Tencent သည် SPARK 2022 ဂိမ်း မိတ်ဆက် ပွဲကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ မည်
Jun 16, 2022, 20:54ညနေ 2022/06/16 23:18:19 Pandaily
တရုတ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီကြီး Tencent ၏ ဂိမ်း ဌာနသည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်“ Spark 2022” မိတ္ဆက္ ပြဲကို ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔ (၂၀း၀၀) နာရီ.
Tencent Games က ကစားသမား များသည် ဂိမ်း နည်းပညာ၊ ဂိမ်း ထုတ်ကုန် အသစ် များနှင့် အချို့သော ဂိမ်း အက် ပလီကေးရှင်း များ ၏လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း ကို မြင်တွေ့ရ လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၎င်း၏အ ောင်မြင် မှုများကို ဝါကြွား ခဲ့သည်။ “ ဂိမ်း ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် စွမ်းအား သည် အစစ်အမှန် ဘဝ သို့ရောက် သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂိမ်း ၏အဆင့် မြှင့်တင် မှုများနှင့် အောင်မြင်မှု များကို အတူတကွ လေ့လာရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင့်လက်တွေ့ အကြား ခရီးသွား ခြင်း၊ အတွေ့အကြုံ အသစ်တစ်ခုကို တွေ့ကြုံ ခံစားရ လိမ့်မည်။”
Tencent Games ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မိခင် ကုမ္ပဏီ၏ ဂိမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဌာန နှင့်၎င်း၏ ဂိမ်း လုပ်ငန်း၏ အော်ပရေတာ ဖြစ်သည်။ Tencent Games, Chinese Literature Limited (Tencent Literature), Tencent Pictures နှင့် Tencent Anime Comics တို့နှင့်အတူ လုပ်ကိုင် ရန် ကုမ္ပဏီသည် Tencent E-Sport အမှတ်တံဆိပ် ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ တွင်တည် ထောင် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tencent Games ၏ Light Speed Studio သည် အမှတ်တံဆိပ်
ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ လက Tencent သည် ပြည်ပ ဂိမ်း အမှတ်တံဆိပ် Level Infinite ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Boston ၊ Los Angeles, Seattle ၊ ကနေဒါ ရှိ Montreal နှင့် စင်ကာပူ ရှိ ဂိမ်း စတူဒီယို များစွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂိမ်း အမျိုးမျိုး အတွက် နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှု ပေးသည်။ ေနာက္ဆံုး ရသ တင္း မ်ားအရ Tencent သည္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ လီဗာပူးလ္ ၿမိဳ႕တြင္ Tencent Games Global Partners ၏ ဒုဥကၠ႒ Pete Smith ဦးေဆာင္ေသာ ဂိမ္း စတူဒီယို အသစ္ တစ္ခုကို လည္း ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။
ကုမ္ပဏီ ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် Tencent ၏ ပြည်တွင်း စျေးကွက် မှ ၀ င်ငွေသည် ၁% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ယွမ် ၃၃ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ စျေးကွက် တွင် ဂိမ်း ၀ င်ငွေသည် ၄% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၀. ၆ ဘီလီယံ ယွမ် သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ငွေလဲလှယ် နှုန်းဖြင့် ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Brave နှင့် Clan Clash ကဲ့သို့သော ဂိမ်း များ၏ ၀ င်ငွေ တိုးတက် မှုတွင် ထင်ဟပ် နေသည်။
“ Chinese Electricity Weekly” : Tencent Global Electricity 2021 Summit of the Electricity Planning, 2020 World Electricity Electricity for Shanghai Economic